Jwxo-shiil, oo Dawarsi Fool-xun ka Bilaabay Australia – Rasaasa News
Jul 24, 2011 Jwxo-shiil, oo Dawarsi Fool-xun ka Bilaabay Australia
Eebahayow aduunkaa i qaadi waayey ee meel aan layga aqoon i gee, sidaas waxaa habeen walba ku Rabi tuugta dambiile Jwxo-shiil.Tolow haduu Eebahay geeyo meel aan laga aqoon muxuu samayn lahaa? Jawaabtu waa sida uu Australia hada ka samaynayo.
Warar xaqiiq ah oo aan ka helay qaar ka mid ah Jaaliyada Somalida Ogadeeniya ee ku nool dalka Australia, waxay noo soo sheegeen in Jwxo-shiil, uu dawarsi fool-xun ka bilaabay dalka Australia.
Wararku waxay sheegayaan in Jaliyada gabalka Ogaden u dhalatay ee degan dalkaas ay kooban tahay. Arintaas daraadeed Jwxo-shiil, waligii wuu ka war wareegi jiray oo ma tagin Australia, sababtuna waxay ahayd in qaaraan yar laga heli karo, kaas oo aan dhaafayn Mr Qaaxo.
Hadaba, sida aynu la socono Jwxo-shiil, waxaa uu markii ugu horaysay safar u aaday Australia, isaga oo afka ka sheegay in Aw Cadaani afgarad laga dhex abuuri doono, laakiin waxaa u qarsoonaa arinta Tuugsiga ah ee uu eegga wado.
Aw Cadaani, afgarad wuu ka diiday Jwxo-shiil, wuuse imaaday shirkii uu ku tuugay wiilka waalan ee Mareexaan Ducaale. Dadka shirka ugu tagay Jwxo-shiil, dhamaantood waxay ahaayeen dad u dhashay Jamhuuriyada Somaliya.
Jwxo-shiil, isma waydiin dadka shirka yimid cida ay ahaayeen, laakiin waxaa uu is tusay in uu wax ka heli karo, dabadeedna Jilibka ayuu laabtay.
Warar ayaa sheegaya in Jwxo-shiil, uu Jiscinkii ka dhamaaday, Hoteelka lacagtiisiina la bixin waayey. Kolkaas ayuuu Jwxo-shiil, oo hore ugu talo gashanaa u bandhigay Qaaxo sheeko ah in Qaaraan Jabhada loo guro, laguna qoro Qorahey.com in dagaalo ay ka dhaceen gabalka todobaadkan, wiilasha dagaalka ku jirana ay u baahan yihiin Jiscin iyo Dhiig Joojis.
Waxayna uruuriyeen dhawr duq iyo afar habrood oo mudeec ah, kuwaas oo Albaabada ku garaaca dadka, si la mid ah sidii uu ka samayn jiray Maraykanka.
Ceebta dhacday awal hore Ogadeen ayuu Qaaraanka ka qaadan jiray eegase wuxuu jideeyey in Somali oo dhan laga Qaado [somali iyadaaba Abaaraysan].
Waxaa la garaacaa baa Albaab walba oo Somali degan tahay, iyada oo la odhanayo Jabhada soo taageera Somaliyey dagaal baan ku jiraaye. Waxaa inta badan ay dadka Somalida ahi [oo ay aafo qabiil quluubtooda gashay] ugu jawaabaan Abaaraa baa jirta anagana gabalkeenii aan Qaaraan u aruursanaynaa.
Waxaa la sheegay in Ogadeenka oo kaliya, ha laguu duceeyo iyo ciroolayaal baan nahay xoogaa laggaga qaadayo.
Sida ay wararku sheegayaan Jwxo-shiil, wali ma helin kharajkii Hoteelka, hadiise ay todobaadkan wax soo gaadhsiiyaan dadkii uu dirtay, waxaa la sheegayaa in uu Qaaraan koradhsi u sii aadi doono New Zealand.